Efa vita ny fihibohana 14 andro ary efa afaka nody izy rehefa hita fa tsy mitondra ny soritr'aretina Covid-19. Izao anefa dia nalaina indray izy ary notazomina ao amin'ny hopitaly Anosiala. Sady tsy ampy ny fikarakarana no betsaka ny tsy mandeha amin'ny laoniny, raha ny fanazavany izay nampiany fa kivy ary tsy te-hihira intsony ny tenany
Mody manao lasa adala rehefa voasambotra. Izay indray no paikadin’ny jiolahy ankehitriny. Isan’izany ilay izay nandratra polisy etsy Ampefiloha ka voasambotra ihany rehefa nanaovana fidinana an-tsehatra avo lenta izay nataon’ny Service-Anti Gang. Mody tsy tompon’ny tenany izy nandritry ny fanadihadiana. Tsy mitombina anefa izany satria matoa izay nahavita nitsoaka sy niaro ny tenany ary nampiasa herisetra nandritry ny fanenjehana dia olona salama saina izay. Tsy vitan’izay fa mbola fantany koa ny tsy fisian’ny olona tao amin’ilay trano nandritry ny fidirany tao.
MINISITRY NY SERASERA VOASAZY
Nataon’ny olona ny fampitahana tsara faka tahaka. Izany dia mahakasika ny fampiatoana tamin’ny asany ny minisitry ny serasera ao Afrika Atsimo rehefa tratra mbola namonjy fety ihany nandritry ny fotoana fihibohana. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny filoha afrikana tatsimo ary nampiato ny asan’ilay minisitra. Ary ny eto amintsika izay efa be loatra ny tsy mety, saika isan-kerinandro aza izany, kanefa toa tsy mba misy akory na fampitandremana iray aza avy amin’ny filoha.
MALAGASY MATY ANY EOROPA
Mitombo isa ihany ny teratany malagasy izay maty any Eoropa. Fantatra koa fa namoy ny ainy omaly ny mpitsabo mpanampy iray ao amin’ny hopitaly iray ao Belgique. Ny tao Lafrantsa no tena efa maromaro ny malagasy namoy ny ainy ary saika miasa eo anivon’ny tobim-pahalasamana avokoa izy ireo. Ny any an-toerana koa moa dia tsy maintsy miasa avokoa ny rehetra izay manana fahaizana ara-pahalasamana ary tsy an-kifidy fiaviana izany.
Mirongatra ny famonoana sokatra mba hanaovana trafika ny henany. Ny tena mampalahelo dia ao anaty faritra arovana no mbola miroborobo izany famonoana izany. Tao Ampananihy, tao amin’ny valan-javaboahary antsoina hoe Tsimanampesotse no nahatratrarana soatra efa vita kitoza izay milanja 100 kilao mahery. Nisy ny voasambotra ary naiditra am-ponja. Tsiahivina fa sady enjehina amin’ny lalàna famaizana no enjehina amin’ny lalàna iraisam-pirenena ny fangalarana sokatra.
Lasa « werawera » tanteraka ny fizaràna vary mora avy amin’ny fitondram-panjakàna. Ny teny Ampitatafika dia tezitra ny ben’ny tanàna izay tsy mitondra ny loko volom-boasary ary nanome baiko ny fanafoanana avy hatrany ny fizaràna tao amin’ny tanàna iadidiany. Ny antony dia satria ny kandidà ben’ny tanàna IRD izay tsy lany tao an-toerana no nieboebo tetsy sy teroa nizara izany ary tsy mba naka alàlana akory tamin’ny fari-piadidian’ny tanànan’Ampitatafika. Sendran’ny nahay azy…